တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်မှုအကြောင်းပြချက်နဲ.၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုအချိန်အကန်.အသတ့်မရှိရွှေ.ဆိုင်းမည် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
ဗမာစစ်အစိုးရအနေနဲ. ၂၀၁၀ တွင်ပြုလုပ်မည့်ရွေးကောက်ပွဲကိုသူ.ဘက်အားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ဖြစ် အောင်နည်းလမ်းရှာတဲ့အထဲမှာတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်မှုအကြောင်းပြချက်နဲ.ရွေ.ဆိုင်းမည်လို.စစ်ဖက်နဲ.နီစပ်တဲ့သတင်းရပ်ကွ က်တစ်ခုကတိုင်းရင်းသားအသံကိုပြောပြသည်၊
ဗိုလ်သန်းရွေးအနေနဲ.သူမွေးထားတဲ့ကြံ.ဖွတ်အသင်းကိုနိုင်ငံရေးပါတီအသွင်ကူးပြောင်းပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို.ရည်ရွယ် ထားတဲ့အချိန်မှာ တတိယအင်းအားစုလို.ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးအင်းအားစုတွေကတခြားသောစစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့်လျှိ.ဝှက်အားချိတ် ထားမှုရှိတယ်လို.သူကဆက်ပြောပါသည်၊
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်းအားစုများကိုနယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်းကူးပြောင်းဖို. တပ်မတော်စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေး အရာရှိ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်အားတာဝန်ပေးအပ်ထားသည်၊အသွင်းကူးပြောင်းရေးသတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ခဲ့သော်လည်း သူတို.လိုအပ်တဲ့တပ်များစည်းရုံးမရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ကအချိန်ပိတ်အစီရင်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်၊
ဗိုလ်သန်းရွှေကိုယ်တိုင်ကလည်း မိန်.ခွန်းပြောကြားတဲ့နေရာမှာ ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမျှတမှုရှိအောင်လုပ်ပေးမည်ဟုအကြိ မ်ကြိမ်ပြောကြားခဲ့သော်လည်းဘယ်သူမှအကောင်းမမြင်ဘဲ သူ.စကားကိုဘယ်သူမှမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆိုးနေတယ် လို. စစ်ဖက်သတင်းရပ်ကွက်ကပြောပြသည်၊သူသေဆုံးတဲ့အထိအာဏာဆုပ်ကိုင်သွားမည်လို.လဲကြိမ်မောင်ပြောဆိုခဲ့တယ် လို.သူကဆက်ပြောပြသည်၊
ထို.ကြောင့်၊နောက်ဆုံးချမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကရွေးကောက်ပွဲကိုအချိန်အကန်.အသတ်မရှိရွှေ.ဆိုင်းတဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်၊ယင်ကဲ့သို.၊ကြေညာလို.ရအောင် ပြည်တွင်းစစ်ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်းအားစုတွေကို အကြီးအကျယ်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးပြည်တွင်းရှိအင်းအားပြိုင်စစ်ဗိုလ်တွေအကြားလာဘ်ပေးလာဘ်ယူနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်စီးမှု တွေကိုအကြောင်းပြပြီအချင်းအချင်းးအရေးယူမှုလုပ်မည်လို.ဆိုပါသည်၊
Comments on: "တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်မှုအကြောင်းပြချက်နဲ.၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုအချိန်အကန်.အသတ့်မရှိရွှေ.ဆိုင်းမည်" (1)
2008 ဖွဲ့စည်းပုံကိုင်ထားပြီးပြီး ဘာမှမလုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ဆူဆူပူပူလုပ်ရင်တော့ စစ်တပိအုပ်ခုပ်သက်နောက်ထကိ နှစိ ၂၀ ကြာသွားနိုင်တယ်။ ရှငိးရှင်းပြောရရငိအားလုံးကနအဖလကိထဲမှာပါ